Noqo Qaadida Screw ee ugu Fiican, Wiish Xiaolong, Mashiinka quudinta budada, Gaadhilaha fur-fudud/quudinta tooska ah ee qalabka raadraaca saaraha iyo Warshada |Xingyong
Gaadhi maroojiska ah, wiishka Xiaolong, mishiinka quudinta budada, qaade helical-kumbuyuutar/ quudin toos ah oo la socodka heerka walxaha
Gaadhida Screw Sidoo kale loo yaqaan xiaolong Hoist iyo spiral Blade Ffedet waxay cusboonaysiin kartaa noocyo kala duwan oo walxo budo ah.
Waxaa loo isticmaali karaa mashiinka baakadaha ama qalabka la xidhiidha si loo ogaado 304 birta aan fiicnayn.
Quudinta tooska ah ee raadraaca habeenka walxahaWaxa kale oo loo isticmaali karaa marar kale marka laga reebo matoorka iyo xajinta, inta kale waa la sameeyay.
Isticmaalka badeecada: ku habboon gudbinta walxaha budada qalalan ee aan dhegta lahayn iyo qadar yar oo ah qalab isku dhafan oo qoyan iyo qalab yaryar, sida: bariiska, milixda budada caanaha, bur soy iwm Codsiga: ku habboon gudbinta alaabta budada qalalan ee aan isku xidhnayn, qadar yar oo ah Qalabka isku dhafka ah ee qoyan iyo walxaha yaryar, sida bariiska, cusbada budada caanaha, budada soybean, iwm. Waxqabadka alaabta iyo.
1. Mashiinka quudinta wuxuu qaataa quudinta matoorka ugu muhiimsan ee wareegga korantada iyo matoorka gariirka wareegta sida awoodda dheeriga ah ee quudinta, kaas oo si gaar ah loo kala saari karo oo si gaar ah loo xakameyn karo, kantaroolka dibaddana waa la mideyn karaa.
2. Iyada oo la adeegsanayo kontoroolka madaxbannaan ee E-box, kaydka kontoroolka dibadda ayaa si madax-bannaan u shaqayn karta ama si isdaba-joog ah oo leh qalabka taageerada otel, ku habboon oo fudud.Mugga gaarsiinta waxaa lagu hagaajin karaa wakhti kasta iyadoo loo eegayo shuruudaha.Maaddadu ma fududa in la isku xidho oo waxay leedahay laqabsi xooggan oo alaabta;
3. Silo iyo tuubada gudbinta waxaa loogu talagalay in la kala saaro, qaabdhismeedku waa mid macquul ah, rarista iyo dejinta waa sahlan tahay, gaadiidkuna waa ku habboon yahay.
4. Naqshad dhawrsan oo gaar ah oo aan boodhka lahayn ayaa ka ilaalinaysa xajinta boodhka iyo boodhka.
5. Naqshadeynta si loo fududeeyo nadiifinta walxaha haraaga ah: wareeggu wuxuu dib u celin karaa dheecaanka, dhammaadka hoose ee tuubada alaabta ayaa leh qulqulka albaabka, iyo wareegyada oo dhan waa la kala diri karaa, la nadiifin karaa, lagu rakibay oo lagu ilaalin karaa dhowr tallaabo oo fudud.
6. Marka loo eego jawiga isticmaalka, sifooyinka maaddadu waxay bixiyaan habab kala duwan oo macaamiisha ah si ay u doortaan.
Magaca mashiinka Gaadhi maroojiska
Qaabka XY- LG15
Awood wax soo saar 3 m³/H 5 m³/H 7 m³/H 12 m³/H
Dhuumaha Dia. ø114mm ø141mm ø159mm ø219mm
Korontada 0.81KW 1.56KW 1.56KW 2.2KW
Qaab dhismeedka mashiinka
# 304 birta aan daahin
Hal-waji, laba-waji ama saddex-waji 180-220V, saddex-waji 350V-450V,50-90Hz
Xagasha u janjeedha
45degreefor heerka caadiga ah, waxa ay macaamiisha karaa 30 ama 60 degrees.
Heerka 2200mm, kuwa kale waa la heli karaa
Miisaanka mashiinka 130KG/180KG/230KG/270KG
Hore: Mashiinka Kala Soocida Dhalada Rotary Dhalooyinka PET, dhalooyinka dhalooyinka, alaabta qasacadaysan,
Xiga: Iibka kulul wiishka hal baaldi ee hal baaldi wiishka ah, hal baaldi qaade hopper ah qaada/wuxuu qaataa mabda'a kor u qaadista shidaalka
Gaadhida fur furka dabacsan
Helical Screw Conveyer
Gaadhida furka toosan
Gaadhida Screw ee Jilicsan
Wershadaha Isku-xidhka Wershadaha
Gaadhida furka caaga ah
Gaadhida Screw yar
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Baakadaha suunka wareejinta, Suunka Gudiyaha Korontada, Gaadhida Skirt Skirt, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Qaadista suunka tubbada, Gaadhida suunka, Dhammaan Alaabta